समीक्षा ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर | | ग्याजेट समाचार
आज हामी तपाईलाई एउटा विशेष विश्लेषण ल्याउँछौं, र फेरि Energy Sistem को साथीहरुको हातबाट। ध्वनि र संगीतसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको विशाल क्याटलग भित्र, यस पटक हामीले एउटा विशेष छनौट गरेको छनौट गरेको छनौं होम स्पिकर 7.
के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँको CD को समय आयो? केहि यथार्थबाट अर्को छैन। हामीलाई थाहा छ, संगीत सुन्ने तरिका धेरै विकसित भएको छ पछिल्ला केही वर्षहरूमा। यसका अलावा हामी हाल अनुप्रयोगहरू र स्ट्रिमि। सूचीहरूबाट संगीत छनौट गर्दछौं। यहाँसम्म कि शारीरिक ढाँचामा पनि यसको कुनै सम्बन्ध छैन। बढ्दो माग पूरा गर्न, ऊर्जा सिस्टेमले हामीलाई यो उत्पादन प्रदान गर्दछ।
1 ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर,, तपाईंको सीडीहरूको लागि अर्को अवसर
2 यो ऊर्जा सिस्टेम होम स्पिकर7हो
2.1 केन्द्रीय एकाई
3 होम स्पिकर,, तपाइँको सबै संगीतको लागि बहुमुखी प्रतिभा
5 पेशेवरहरू र विपक्ष ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर 7
5.5 सम्पादकको विचार
ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर,, तपाईंको सीडीहरूको लागि अर्को अवसर
गृह वक्ता7ऊर्जा उपकरण बाट ध्वनी उपकरण, योसँग अन्तिमको ब्लुटुथ जडान छ जेनेरेसन कुनै पनि उपकरण जडान गरेर स्थिर र गुणवत्ता ध्वनि अनुमति दिन्छ कि जडान। तर पनि, र यो समाचार हो, यस स्टेरियोमा हामी हाम्रो मनपर्ने सीडीहरू सुन्न सक्छौं। के तपाईंले आफ्नो सीडीहरू समाप्त भएको सोच्नुभयो? अझै होईन! तपाईंको ऊर्जा सिस्टेम होम अडियो now अब खरीद गर्नुहोस् अमेजनमा।
ऊर्जा सिस्टेम,dमार्फतहोम स्पिकर,, भौतिक सीडी ढाँचा उद्धार गर्छ हाम्रो शेल्फबाट। एक उत्पादको साथ जुन आरामसंग कम्फर्ट गर्दछ कुनै पनि उपकरणबाट संगीत बजाउनुहोस्। Y एक सीडी प्लेयर को रूप मा अतिरिक्त संग जसले शारीरिक ढाँचाको लागि लामो समय लागिरहेकाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण प्लस प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, तपाईंले कति वर्ष आफ्नो घरको लागि स्टेरियो किन्नुभयो? वर्तमानमा हामी संगीत सुन्ने तरिकाको १० बर्ष अघिको केही गर्नुपर्दैन। तर कसको घरमा दुख्ख CD हरूको पाइल छैन? अब, कुनै पनि प्लेटफर्मबाट स्ट्रिमि music संगीतको मजा लिनको लागि यसका साथै। र शक्ति को हाम्रो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटलाई सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकामा जडान गर्नुहोस्. हामी ती सीडीहरू लाई पनि जीवनमा ल्याउन सक्छौं जुन हामीले दिनमा फिर्ता किन्यौं।
यो ऊर्जा सिस्टेम होम स्पिकर7हो
शारीरिक रूपमा, संगीतको लागि यो ग्याजेट परम्परागत स्पिकर र सामानबाट टाढा नै जुन हामी कुनै पनि फर्ममा लिन सक्छौं। वास्तवमा हामी एक पूर्ण संगीत उपकरणको अगाडि छौं। ती संगीत टोलीहरूबाट प्रेरणा पाए जुन धेरै सफल थिए, उनीहरूको बप्तिस्मा “मिनी चेनहरू” को रूपमा। धेरै ठूलो टोलीको हानि गर्न स्वीप्ट्ने ढाँचा।
ऊर्जा सिस्टेम होम स्पिकर is हो items आईटमहरूको सेट। ला "केन्द्रीय" वा मुख्य भाग जहाँ हामी फेला पार्दछौं टच नियन्त्रणहरू, इनलेट र आउटलेट पोर्टहरूर सीडी प्लेयर। र दुई स्वतन्त्र वक्ता कि हामी सँगै वा अलग राख्न सक्छौं। तर तिमीमुख्य भागको साथ स्पिकरहरूको जडान केबल मार्फत हो भन्ने कुरा ध्यानमा राख्दै। त्यसैले उनीहरूको गतिशीलता सीमित छ। नकारात्मक बिन्दु?
अगाडि, एक संग सुरुचिपूर्ण डिजाइन र धेरै सावधान, हामीले दुई फरक अन्त्यहरू भेट्टायौं। तेर्सो रूपमा विभाजित, हामी हेर्छौं कि तल्लो भाग कसरी धातु सामग्रीको साथ समाप्त हुन्छ। यसमा हामी एउटा फेला पार्दछौं डीसी ट्रे र प्लेब्याक र मेनू नियन्त्रण खोल्न भौतिक बटन। थप रूपमा, यसको छेउमा हामीसँग एक छ USB पोर्ट, र अर्को mm. mm मिमी मिनी ज्याक केबलको लागि एनालग इनपुट.
टुप्पोमा अगाडिबाट, चमकदार कालो प्लास्टिकमा समाप्त भयो हामीले स्क्रिन भेट्टायौं. पर्दा अन्तर्गत छ सीडी प्लेयर ट्रे। हामी पनि फेला पार्दछौं अन / अफ बटन उपकरणको। र भोल्यूम नियन्त्रण को लागी, जुन हामी मेनु नेभिगेट गर्न प्रयोग गर्न सक्दछौं वा स्टेशनहरूमा ट्युन गर्नुहोस्। पछाडि हामीसँग पावर कर्ड छ, र दुई इनपुटहरू स्पिकरहरू कनेक्ट गर्न।
यदि हामी स्पिकरलाई हेर्छौं भने हामी कसरी हेर्छौं यसको निर्माण आधारभूत छ। संग शुद्ध रेट्रो शैलीमा कपडाका सामग्रीले बनेको काठको शरीर र कालो ग्रिल। यसको उपस्थिति यसको सरलताको लागि वास्तवमै आकर्षक छ। र एक लाई धन्यवाद थोरै गेरिश डिजाइन र क्लासिक कुनै पनि कुनामा पूर्ण रूपमा फिट हुनेछ कुनै पनि घर को।
स्पिकरको आकारले कुनै पनि तखता वा शेल्फमा सजीलो "नेस्टेबल" बनाउँदछ। एक उचाई २२०mm र चौंडाई १ 220० मिमी, तिनीहरूका आयामहरू हामी जहाँ चाहान्छ त्यहाँ राख्न समस्या हुनेछैन। हो, हामीले त्यो बिर्सनु हुँदैन प्रत्येक स्पिकरको केबल हुन्छ जुन हामीले केन्द्रीय एकाईमा जडान गर्नुपर्दछ। केबल कनेक्टर एक "क्लिक" अन्त्यको साथ धेरै सरल छ जुन हामी हाल्न सक्छौं र एक सेकेन्डमा टेक अफ गर्न सक्छौं।
अब तपाईंको ऊर्जा सिस्टेम होम अडियो Buy खरीद गर्नुहोस् अमेजनमा नि: शुल्क शिपिंगको साथ
होम स्पिकर,, तपाइँको सबै संगीतको लागि बहुमुखी प्रतिभा
संगीत बजाउनको लागि उपकरण राख्नु, हेडफोनको बाहेक, कुनै पनि घरमा आवश्यक छ। जब हामी स्पिकर किन्न जान्छौं हामी केहि चीजहरूलाई ध्यानमा राख्छौं। डिजाइन, शक्ति, स्वायत्तता, र निश्चित रूपमा, मूल्य। गृह अध्यक्ष7यी परिसरहरूको एक बिट सीमांकन गरिएको छ किनभने बजार को अर्को क्षेत्र मा अवस्थित छ। अहिलेको लागि, यस अवस्थामा यो पोर्टेबल स्पिकर होइन।
यस उपकरणको साथ हामी फेला पार्दछौं पुरानो शैलीको फिक्स स्टिरियो, तर अधिक प्रजनन क्षमता संग। आकार र डिजाईनको साथ जुन उनीहरूलाई सुरूबाट मनपर्दछ। र सबै भन्दा माथि, यसको मूल्यले यसलाई रमाईलो बनाउँदछ र एउटा गम्भीर विकल्प जुन हाम्रो घरलाई हामी धेरै मन पराउँदछौं.
एक अन्य सामानहरू जुन यसलाई अन्य अडियो उपकरणहरूबाट भिन्न गर्दछ यसको यो हो रिमोट कन्ट्रोल। सानो रिमोट जुन बनाउँछ हामीले कुनै पनि समयमा टोलीसँग कुराकानी गर्न आवश्यक पर्दैन। स्मार्टफोनबाट ब्लुटुथ म्यूजिक प्लेब्याक नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनुको साथै रिमोटसँग हामी यसलाई प्रदान गर्ने बाँकी सुविधाहरू पनि नियन्त्रण गर्न सक्दछौं। यहाँ अब तपाईं ऊर्जा सिस्टेम होम अडियो buy खरीद गर्न सक्नुहुन्छ अमेजनमा धेरै रमाईलो मूल्यमा।
हामी संगीत बजाउन सक्छौं, जस्तो कि हामीले पहिले नै टिप्पणी गरिसकेका छौं सीडीको साथ। थप रूपमा, प्लेयरले पनि रेकर्ड गरिएको सीडीहरू प्ले गर्दछ MP3 ढाँचा। को माध्यम बाट USB पोर्ट हामी यसको फ्रन्टमा फेला पार्दछौं हामी पेनड्राइभ वा बाह्य मेमोरीबाट संगीत प्ले गर्न सक्छौं। USB इनपुटको साथ, हामी पनि फेला पार्दछौं Mm.mm मीमी ज्याक एनालग इनपुट जहाँ हामी कुनै अन्य बाह्य उपकरण जडान गर्न सक्छौं।
अवश्य पनि हामीसँग छ ब्लुटुथ जडान, २ वर्ग २.2 गीगाहर्ट्ज कार्य आवृत्तिसँग र एक संग १ 10 मिटरको दायरा टाढा सबै प्रोफाइलसँग यसको अनुकूलताले कटौती वा अवरोधहरू बिना स्थिर ध्वनिको साथ एक कनेक्शन प्रस्ताव गर्दछ।
हाइलाइट गर्नुहोस् कि ऊर्जा सिस्टेम होम स्पिकर is हो एफएम रेडियोले सुसज्जित। अधिक प्रायः निर्माताहरूले बिर्सिएको एउटा अतिरिक्त। र त्यो, विशेष गरी यस जस्तो स्थिर उपकरणमा, धेरै सराहना गरिन्छ। यो संग एफएम फ्रिक्वेन्सी दायरा: .87,5 108.~ ~ १०० मेगाहर्ट्ज। हामी संग छ automatic० स्वत: खोज प्रिसेट्स सम्म। र हामी आफैंले खोज म्यानुअली पनि अनुकूलित गर्न सक्छौं।
मोडेल होम स्पिकर 7
पोटेरिया W० वटा - २ x १W डब्ल्यू ”" पूर्ण रेंज स्पिकर -
खेलाडी CD CD-R CD-RW MP3 उपयुक्त
ब्लुटुथ कक्षा २. GHz आवृत्तिको साथ
एनालग इनपुट Mm.mm मीमी ज्याक
रेडियो एफएम हो 50० प्रिसेटहरू सहित
स्पिकर आयाम 180 x 220 x 120 मिमी
केन्द्रीय एकाई आयाम 154 x 127 x 253 मिमी
मूल्य 99.90 यूरो
लि link्क खरीद गर्नुहोस् ऊर्जा सिस्टेम होम अडियो 7
पेशेवरहरू र विपक्ष ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर 7
एक सुरुचिपूर्ण र साधारण उपस्थितिको साथ सावधानीपूर्वक डिजाइन जुन कुनै पनि घरमा फिट हुन्छ।
विकल्पहरूको बहुमुखी प्रतिभा विभिन्न तरिकामा संगीत सुन्न सक्षम हुन।
एफएम रेडियो हुनु भनेको खातामा लिनको लागि अतिरिक्त पोइन्ट हो।
रिमोट कन्ट्रोल सबै विकल्पहरू नियन्त्रण गर्न सक्षम छ।
समझदार र सुरुचिपूर्ण डिजाइन
एक उपकरणमा सबै ढाँचा
यो मोबाइल उपकरण होईन।
स्पिकरहरू हेडनुइटमा केबल मार्फत जडित छन् जसले उनीहरूको गतिशीलतालाई सीमित गर्दछ।
यसलाई प्लग चाहिन्छ र यसमा ब्याट्री छैन।
यो पोर्टेबल छैन
जडान स्पिकरहरूका लागि केबल
आन्तरिक ब्याट्री छैन
ऊर्जा सिस्टेम होम स्पिकर।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » ऊर्जा सिस्टेम होम स्पीकर समीक्षा गर्नुहोस्